Warbixin ku saabsan makatabada oo ku qoran Afka Soomaaliga - Bibliotek Värmland
Warbixin ku saabsan makatabada oo ku qoran Afka Soomaaliga
Halkan maktabada ee Värmland waad awoodaa inaad ka amaahato kitaabo”Buugaag” oo luqado kala duwan ku qoran. Adiga waxaad xitaa ka amaahan kartaa filimo,buugaagta la dhageysto,wargeysyada iwd. Haddii aad rabto inaad luqada isweedhishka tababar aad ku sameyso waxaa yaala buugaag akhriskoodu sahlan yahay iyo buugaagta la akhristo marka baabuurta la baranayo. La amaahanayo waa lacag la`aan.
Halkan maktabada ku soo dhawoow inaad fariisato iyo ku akhrisato,wax ku barato, ka gal waxyaabaha lagu qabto iyo dhaqdhaqaaqyada dadka waaweyn iyo carruur ama aad iska timaado.
Halka maktabada intooda badan waxaa laga helaa shaashadaha ”datorer” iyo khadka xarig la`aanta kuwaasoo adiga aad isticmaali karto. Halka maktabado fara badan xitaa waxaad awoodaa inaad kasoo daabacato warqado, koobi aad ka sameysato iyo kusoo sawirato ”skanna” warqadaha qiimo aad u yar.
Meeshaan hoose adiga waxaad ka heleysaa jawaabta su`aalaha caadiga ah. Adiga mar walba waad weydiin kartaa shaqaalaha haddii adiga wax su`aalo ah kula soo gudboonaadaan.
Sideen sameeyaa aniga marka aan amaahanayo?
Si aad u isticmaasho adeegyada maktabada, sidoo kale aad amaahaneyso, waxaad ku khasban tahay inaad ku leedahay maktabada koonto iyo tirooyinka lagu galo ”pinkod”. Tani wax qarash ah maaha iyo wuxuuna kugu shaqeynayaa maktabadaha Värmland oo dhan. Sidaan ayaad uga sameysan kartaa koonto adiga ah 18 sanno iyo wixii ka weyn meesha maktabada:
Gal meeshaan "bibliotekvarmland.se/bibliotekskonto” iyo buu-buuxi foomka. Tani waxaad ku sameyn kartaa gurigaaga ama meesha maktabada.
Booqo maktabadii aad rabto ee Värmland si aad u saxiixdo heshiiskaas. Sii qaado aqoonsi waqtigiisa uusan dhicin oo sawir ku dhegen yahay ”fotolegitimation”.
Haddii aad rabto waxaa lagu siinayaa kaarka lala tago maktabada oo ku diiwaan gashan adiga koontadaada ee maktabada, laakiin tan maaha mid khasab ah inaad heysato. Adiga soo wargeli maktabada haddii uu kaa dhumo ama lagaa xado kaarkaaga, taasoo shaqaalaha ay ka caawinayaa adiga si ay u xiraan kaarkaas.
Haddii adiga 18 sanno aad ka yar tahay ka sameyso koonto maktabda iyadoo aad u mareyso hal heshiis oo khaas ah kaasoo aad kasoo daabaceyso meesha websaytka ”webbplatsen” iyo halka maktabada. Adiga waalidkaa waa khasab iney saxiixaan.
Marka aadan lahayn isweedhishka tobankooda nambar ”personnummer” ma awoodid inaad ka buux-buuxiso foomka halka webka ”webben”. Gal haddii kale maktabada iyo weydiiso haddii ay ku caawini karaan.
Maxaan ka qaban karaa aniga meesha websaytka ”Bibliotekvarmland.se”?
Halka websaytka waxaad ka heleysaa wax walboo oo laga helo maktabada oo laga amaahdo. Halkaas ayaad xitaa sidoo kale ku arki kartaa waxyaabaha ka socda maktabada, saacadaha ay furan yihiin, tilmaamaha kitaabada ”buugaagta” iyo waxyaabo kale oo badan.
Haddii aad gasho adiga halkaan ”aniga dhinaceyga” ”Mina sidor” meesha websaytka waxaad ka arkeysaa wixii aad amaahatay iyo inta waqti aad heysato amaahdaas. Adiga waxaad ku galeysaa tobankaaga nambar ”personnummer” ama kaarkaaga maktabada nambarkiisa iyo adiga tirooyinka aad ku gasho ”pinkod”.
Sideen ku raadiyaa kitaabo ”buugaag” ku qoran aniga luqadeyda?
Uga raadi kitaabkii ”buugii” si toos ah meesha lagu qoro marka wax la raadinayo halka websaytka. Kabacdi markii aad adiga riixday halka raadinta waxaad sameyn kartaa inaad kala shaandheyso jawaabtii kasoo baxday raadinta xag luqad. Raadi cinwaanka luqad ”Språk” meeshaas ka samey is shaandheyn iyo dooro adiga luqadaada.
Muddo intee le`eg ayaan aniga amaahan karaa?
Caadi ahaan muddada amaahda waa afar usbuuc laakiin tani waxaa jira mid si gooni ah loo tixgeliyo. Marka adiga aad amaahato waxaa lagu siinayaa warqad ”kvitto” taasoo ku qoran taariikhdee adiga ay khasab kugu tahay inaad soo celiso sheyga aad amaahatay. Sidoo kale adiga amaahdaas waxaad ka arki kartaa markii aad gasho meesha ”aniga dhinaceyga” ”Mina sidor” halka websaytka. Weydii shaqaalaha haddii adiga aadan iska hubin.
Sideen anigu u amaahan karaa sheygii hore aan u amaahday mar kale?
Haddii adiga hal kitaab ”buug” aadan dhameysan waa awooda inaad si sahal ah adiga aad uga amaahato meesha websaytka. Adiga sidaan samey:
Garaac meesha gal ”Logga in” meesha kore dhinaca midigta halka websaytka. Adiga waxaad ku galeysaa kaarkaaga maktabada nambarkiisa ama tobankaaga nambar ”personnummer” iyo afarta tiro oo aad ku gasho ”pinkod”.
Gal halkaan ”Mina sidor” geeska kore ee midigta.
Adiga amaahdaada waqtigan xaadirka ah waxaa lagu soo ururinayaa cinwaankaan hoostiisa ”Mina lån”. Haddii aad rabto inaad amaahato kitaab ”buug” garaac adiga guluuska amaaho mar kale ”Låna om”.
Xitaa waad wici kartaa makatabada iyo ka codsan kartaa caawinaad inaad amaahato mar kale.
Maxaa dhacaya haddii waqti dambe aan celiyo sheygii?
Ma celisay waqti dambe waa khasab inaad bixisaa lacag guno ah. Inta aad bixineyso waxay ku xiran tahay sheygii aad amaahatay iyo inta waqti aad la daahday celiskooda. Xusuusnow adiga inta badan inaad awoodo inaad dheereysan karto waqtiga iyadoo aad u mareyso inaad amaahato mar kale.
Sideen ku arkaa in maktabadeyda ay furan tahay?
Warbixinta ku saabsan maktabadaada waqtiyada ay fura tahay iyo waxa kale sidaan ayaad u heleysaa adiga:
Riix halkaan ”Bibliotek & öppettider” ee liiska meesha websaytka.
Kor ka raadi maktabadaada liiska. Maktabadaha waxaa loo kala saarey sida ay isugu xigaan degmooyinka Värmland.
Hadda adiga waxaad aragtaa waqtiguu furan yahay iyo waxa kale oo ku saabsan maktabadaada.
Ma kasoo daabacan karaa warqado aniga iyo koobiyeysan karaa halka maktabada?
Haa, halka maktabadaha intooda badan waa kasoo daabacan kartaa, koobiyo iyo sawiro kaga sameysan kartaa qiimo yar. Weydii shaqaalaha maktabadaada markaas caawinaad waad heleysaa
Aniga ama qof aan aqaano ma tagi karno maktabada oo ma soo amaahan karno buugaag, mana caawini kartaan?
Anaga adeegeena ”buuggii waa imanayaa” ”Boken kommer” waxaa loogu talagalay kuwa aan tagi karin maktabada oo aan kasoo amaahan karin buugaag. Taas badelkeed anagaa guriga ugu imaneyna oo u wadna buugaag dadkaasi. Weydii shaqaalaha maktabadaada haddii buuggii imanayo ”Boken kommer” taasoo lagu siinayo warbixin dheeraad ah.
Maxay kugu martiqaadayaan makatabada caawin marka aan rabo inaan tababar ku sameeyo luqada isweedhishka?
Halka maktabada waxaa jira caawino aad u fara badan adiga raba inuu tababar ku sameeyo isweedhishka. Weydii shaqaalaha markaas caawinaad waad heleysaa. Tusaale caawinta jirta waa:
Kitaabo ”buugaag” ku qoran isweedhish sahlan oo la akhristo.
Buugaagta tababarka baabuurta ”Övningsböcker”.
Buugaagta leh luqadaha isbarbar socda ”parallellspråk”.
Mararka qaarkood la soo abaabulo meelo lagu qaxweysto ”språkcaféer” luqada ee maktabada.
Sideen ku akhrin karaa aniga wargeysyada khadka ee akhristaha saxaafadda?
Akhristaha saxaafadda ”Pressreader” waxaad ka akhrisan kartaa kumanaan kun oo wargeysyo ah oo leh luqado kala duwan. Sidaan ayaad u isticmaali kartaa akhristaha saxaafadda ”Pressreader”:
Ku gal koodkaaga halka makatabada ”Bibliotekvarmland.se”
Gal dhinaca ”www.bibliotekvarmland.se/pressreader-hemma”.
Garaac tillmaamaha ”Använd Pressreader / Use Pressreader” kaasoo laga helo meesha ugu hooseyso ee dhinaca.
Waxaad imaneysaa adiga hadda halka ”Pressreaders” ee websaytka iyo inaad ka bilowdo akhrinta wargeysyada. Garaac halkan luqado ”Languages” kor geeska bidixda halka ”Pressreaders” bogga lagu soo saaro wargeysyada ku qoran afkaaga.
Haddii adiga aad ku xiratay maktabadaas ”wifi”keeda uma baahnid inaad qaado talaabadaas kore. Midaas bedelkeeda adiga waxaad si toos ah u geli kartaa halkaan ”www.pressreader.com” ama isticmaala “Pressreaders” abka ee iPhone/iPad iyo Android”.
Aniga waa igu adag tahay akhriska,sideen caawin ku heli karaa?
Waxaa jiraa habab kala duwan oo aad caawin akhriska ku heli karto inkastoo ay ugu horeyso isweedhishka luqad ahaan ”dock främst på svenska som språk”:
Buugaagta maqalka ”Talböcker”, sidoo kale loogu yeero ”Daisy-böcker”, waa buugaagta maqalka oo si bayaan ah loo akhrinaayo. Qof qaba xanuunada dhimanaanshaha ”funktionsnedsättning” taasoo sameyneysa iney ku adkaato akhrinta qoraalka xaq ayuu u leeyahay inuu amaahdoo buugaagta maqalka. Buugaagta maqalka waxaa laga helaa maktabada oo laga amaahdaa iyo websaytkan ”Legimus”. La hadal shaqaalaha maktabada markaas caawin waad heleysaa adiga.
Buugaagta sahlan ee la akhristo waa buugaagta qoraaladu ay gaaban yihiin iyo sahlan yihiin. Buugaagtaas waxaa loo amaahan karaa guriga taasoo lagu amaahan karo caadi ahaan koontada maktabada. Shaqaalahaa ku caawinaya adiga iney kuu helaan buugaagta sahlan ee la akhristo.
”Storstilsböcker” waa buugaagta leh qoraalada balaaran oo aan caadi ahayn. Waa kuu fiican yahay adiga aragtidaada ay daciifka tahay ”synnedsättning”. Buugaagtaas waxaa loo amaahan karaa guriga taasoo lagu amaahan karo caadi ahaan koontada maktabada. Shaqaalahaa ku caawinaya adiga iney kuu helaan buugaagta sahlan ee la akhristo.
Ma heysaan buugaagta Khadka oo ku qoran afkeyga?
Websaytka maktabada adduunyada ”Världens bibliotek” waa qayb ka mid ah maktabadaha gudaha isweedhan. Waa kuwan buugaagta xaga khadadka oo ku qoran afaf kale oo aan ahayn luqada isweedhishka si loo akhristo iyo loona dhageysto. Waa khasab inaad ka sameysataa koonto halkan maktabada adduunyada ”Världens bibliotek” si aad u isticmaasho adeegaan ”tjänsten”. Tani waa lacag la`aan.
Abkan ged-gedi ”Bläddra” waxay kugu martiqaadayaan buugaagta elektarooniga luqadaha qaran ee laga tirada badan yahay. Abkan waa jiraa xaga iPhone/iPad iyo Android iyo maaha shuruud inaad koonto leedahay si aad u isticmaashoo. Abkan waa lacag la`aan.
Sidoo kale adiga waa amaahan kartaa buugaagta elektrooniga iyo buugaagta maqalka iyadoo aad u mareyso abka ”Biblio”. Si kastaba ha noqotee meeshaan waxaa yaala buugaag badankooda isweedhish ah. Soo dejiso abkan xaga iPhone/iPad ama Android. Ku gal tobankaaga nambar ”personnummer” ama kaarka maktabada nambarkiisa ”bibliotekskortsnummer” iyo tirooyinka aad ku gasho ”PIN-kod”. Kadibna bilow inaad amaahato iyo ka akhriso buugaagta xaga ”Biblio”.
Ma laga soo jiidan karaa filimaad dhinaca maktabada?
Degmooyinka gobolkan Värmland intooda badan waxay idinku martiqaadayaan adeega film ee filim sameeyayaasha ”Cineasterna”. Iyadana filim sameeyayaashaas ”Cineasterna” waxaad adiga uga soo jiidan kartaa lacag la`aan kumanaan kun oo filimo ah xaga gurigaaga. Waxaa jira filimo fara badan oo luqado kala duwan leh,labadaba kuwo dadka waaweyn iyo carruur isugu jira. Waxa keliya oo aad u baahan tahay waa koonto xaga maktabada oo leh tirooyinka lagu galo ”pinkod”, shaashada ”dator”, ”smartphone ama surfplatta” si aad u daarto oo aad uga fiirsato filimada iyo khad aad ku xirato.
Sidaan ayaad u isticmaaleysaa adiga filim sameeyayaasha ”Cineasterna”:
Gal ku www.cineasterna.se.
Dooro maktabadaada liiskeeda wareega shaashada dhexdeeda iyo riix halkan sii soco "Gå vidare".
Raadi filim aad rabto inaad daawato ”Fiirsato”.
Ku qor tobankaaga nambar ”personnummer” ama kaarka maktabada nambarkiisa ”bibliotekskortsnummer” iyo tirooyinka aad ku gasho ”PIN-kod”.
Waa laguu ogolyahay! Waa daawan ”Fiirsan” karta filimka muddo 48 saacadood.